Testosterone ntụ ntụ (58-22-0) hplc ma99% | Aosraw Testosterone ntụ ntụ
/ ngwaahịa / Anabolics Steroids / Testosterone ntụ ntụ / Testosterone ntụ ntụ
2.00 si 5 dabere na 7 ahịa Fim
SKU: 58-22-0. Categories: Testosterone ntụ ntụ, Anabolics Steroids
AASraw nwere njikọ na mmepụta ikike site na gram ka usoro nhazi nke Testosterone ntụ ntụ (58-22-0), n'okpuru usoro CGMP na usoro nchịkọta mma.
Testosterone ntụ ntụ bụ isi Characters
aha: Testosterone ntụ ntụ
Ntuzi nke Testosterone na-eji usoro steroid
E nwere aha, dị ka Axiron, Androgel, Fortesta, Testopel, Striant, Testim, Delatestryl, Androderm, nke a na-akpọkwa Ule, ma ọ bụ Ule Nyocha.
Testosterone ntụ ntụ Usage
A na-ejikarị ntụ ntụ nke Testosterone mee ihe dị ka mmanụ a na-agbanye ya n'ahụ. N'ahịa, a na-enwekarị 100mg / ml, 200mg / ml. A na-enyekarị ụdị ịgba ọgwụ niile na 2 ka izu 4.
Ịdọ aka ná ntị na Testosterone ntụ ntụ
Ekwesighi iwere ọgwụ ogwu Testosterone ma ọ bụrụ na ị nwere nfụkasị, maọbụ ọ bụrụ na i nwere:
ọrịa nwoke na-arịa ọrịa ara;
ọnọdụ obi dị njọ;
ajọ ọrịa imeju;
akụrụ ọrịa akụrụ; ma ọ bụ.
ma ọ bụrụ na ị dị ime ma ọ bụ na ị ga-atụrụ ime.
Mmetụta nke Testosterone ntụ ntụ nwere ike ime ka nsogbu dị oke egwu, dị ka akwara buru ibu, obere testicles, infertility, ọbara mgbali elu, ọrịa obi, ọrịa strok, ọrịa imeju, nsogbu ọkpụkpụ ọkpụkpụ, ịṅụ ọgwụ ọjọọ, na mmetụta uche dika aghara na ime ihe ike.
A na-ewere ngwaahịa a dị ka otu n'ime steroid kasị baa uru maka bodybuilders.
Mbelata na mgbagwoju anya glycogen na akwara
Na-eme ka a ghara ịkụda ma na-ewusi ike nke pelvis
(ịṅụbiga ihe mgbakwunye nwere ike iduga mpempe penile na-egbu mgbu, na ịkwa iko)
Na-abawanye na ọnụego basal (izu ike)
Na-amụba n'ọbara cell ọbara ọbara na oke ọbara
Na-arịwanye elu n'ime njikọ protein muscle nke na-eme ka enwekwu ahụ ike.
Testosterone oke ntụ
Testosterone ntụ ntụ ahịa
Esi zụta Testosterone ntụ ntụ si AASraw
AASraw na-enye aka ọcha 98% Testosterone raw ntụ ntụ na bodybuilders ma ọ bụ n'okpuruala labs maka ogwu ojiji.
Testosterone Ezu ntụ ntụ ntụziaka:
7 reviews maka Testosterone ntụ ntụ
Dị ka ị na-agụ echiche m! O yiri ka ị ghọtara ihe dị ukwuu banyere nke a, dị ka
ị dere akwụkwọ dị n'ime ya ma ọ bụ ihe. nke ahụ bụ blog dị mma.
Ọgụgụ dị mma. Aga m alaghachi azụ.
A gwawo m na anyị nwere ike iji viagra n'enweghị ọgwụ dọkịta
Ònye! Magburu onwe nhọrọ nke agba! Nke a blog yiri ka m ochie! Otu agba, ma ị dee isiokwu banyere Testosterone Series, Ọ bụ na kpam kpam dị iche iche isiokwu si m ma ọ nwere mma nke ukwuu otu peeji nke
nhazi na imewe. ahụrụ m ya n'anya
Hey ị ga-eche ka ị mara m ụlọ ọrụ ụlọ ọrụ ị na-arụ?
Enwetara m blog gị na 3 dị iche iche nchọgharị internet na m
aghaghị ikwu na blog a na-ebute ngwa ngwa mgbe ahụ ka ọtụtụ n'ime ndị m zutere tupu.
Ị nwere ike ịnye ezigbo ụlọ ọrụ ịntanetị dị mma na ego bara uru?
Ekele m, enwere m ekele maka ya!
Ọ bụ ebe a
Nke ahụ bụ oge mbụ m tinyere na ibe weebụ gị, kedu ihe?
O juru m anya na nnyocha ị mere iji mepụta nke a n'ụzọ dị ịrịba ama.
ọ bụ ihe dị ịrịba ama.
Agụrụ m paragraf a n'ụzọ zuru ezu banyere iji tụnyere ihe kachasị mma
na teknụzụ ndị gara aga,
M ga-alaghachi ugboro ugboro